Ball nkwonkwo na Pitaman Arm Ngwá Ọrụ Manufacturers - China Ball Joint na Pitaman Arm Arm Factory & Suppliers
Universal Kemeghi jaw Ball Ball Joint puller
Nkebi nke: BT9058
5pcs Replaceable jaw Ball Ball Joint Puller Set, Nkewapu Remover Puller Universal Kemeghi
* Ọhụrụ mgbanwe mgbanwe na mfe emereme maka adabara ndụdụ
* Kwadoro onye ọrụ ịhọrọ nha nha nha na-enweghị iwere ihe ọ bụla n'ụgbọala ahụ
* Kemeghi oghere n'akuku
Iri Wayzọ Slide Hammer Puller Set BT9027B
Nkebi nke: BT9027B
* Tenzọ iri ụzọ slide hama puller set bụ vasatail collection nke ngwaọrụ eji maka a dịgasị iche iche nke puller ngwa. Ọ ga-eji maka Flange ụdị axles, mmanụ akàrà, na ndị ọzọ na pịa kwesịrị ekwesị akụkụ. Ntọala ahụ gụnyere yok abụọ na ụzọ atọ enwere ike ịtọ maka ma ọ bụ na-adọta n'ime ma ọ bụ na mpụga.
5pcs Tie Rod Ball Joint Pitman Arm Ngwá Ọrụ Kit
Nkebi nke: BT9005
Product Description: Nke a 5pcs Ball Joint separator kit setịpụrụ bụ ọkachamara set nke ngwaọrụ maka ụgbọala na ìhè gwongworo. A setịpụrụ gị arụmọrụ nke mmezi ga-ukwuu mma, ọkara ọrụ na-arụpụta abụọ. Dum set na-juru n'ọnụ ke a siri ike ikpe, ebe ngwaọrụ iji, ị ga-na o siri ike furu efu ngwaọrụ a kọmpat ikpe. Ezubere ngwaọrụ dị ka jikọtara ya nke ga - anọgidesi ike. Atọ atọ na-agbanwe agbanwe maka iji ya na hama ma ọ bụ ikuku ikuku.
6pcs Front End Service Ngwá Ọrụ Kit
Nkebi nke:: BT6020
Ọkachamara Ọkachamara Ọgwụgwụ Pitman Arm Puller Tool Kit
* Nke a Front End Ball Joint Service Ngwá Ọrụ Kit na-pụrụ iche maka mfe nkewa sere mwepụ nke obi ụtọ na nkwonkwo, Front tie mkpanaka nsọtụ na pitman ogwe aka na kasị ewu ewu ụgbọ ala ụdị. Ọ dabara nke ọma n'ụgbọala ndị nwere obere igwe, ụgbọ ala etiti na ụgbọala ndị na-enwu gbaa, MA ọ bụghị nke dabara n'ụgbọala zuru oke, nke dị n'etiti na nke buru ibu. na nkwonkwo bọl na ọtụtụ ụgbọ ala.
5pcs Nrụgide oru Tie Rod End End Ball Joint Tool Kit Auto Mmezi Ngwá Ọrụ
Nkebi nke: BT2511
APPLiATION: A na-eji ihe eji ekewapụ bọọlụ maka ikewapụta nkwonkwo bọọlụ site na ogwe aka nkwado na - aga n’ihu ụkwụ anọ mbanye, ma anụ ụlọ ma mbubata.
Ogo: Ntọala a na-eji otu ngwongwo ígwè na-arụ ọrụ nke na-eme ka ọ dịgide na ike iji guzogide nnukwu ọrụ hammering nke a na-ebufe na mgbakwunye akpaaka na ụgbọala gị ma ọ bụ ọrụ gị.
Ball Joint separator (Nnukwu agba)
* Idebe esorowo jupụtara na nkume, ewepụghị nnukwu agha imewe maka wepụ n'iru na nkwusioru bọl nkwonkwo ruo 30mm dayameta
* Ngwa: Audi, Mazda, Benz, BMW
Bọọlụ Nkwonkwo Nkeji
* Ball Joint separator maka wepụ n'iru na nkwusioru bọl nkwonkwo ruo 20mm dayameta.
* Design maka wepụ track mkpanaka ọgwụgwụ si n'iru ogwe aka na-enweghị imebi taper pin.Suitable for most samll cars & light vans.
* Awgha ikike: 17mm